Lamoka lamokany ny vahoaka | NewsMada
Aleo hazava sao tsy mifankahazo ny resaka: leo sy tofoka ny hoe lamoka, ary izay tsy foy sy tsy tanteraka hatramin’ny farany ny lamokany: lamokan’atody, lamokan’olona, lamokam-paty izay mamo tsy mahatsiaro tena, lamokan-torimaso izay torimaso tsy vanona na fohy loatra… Inona no itanisana izany eto?
Lasa adihevitra be ny amin’ny hoe “Manotrika atody lamokany” navoakan’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi), ny faran’ny herinandro teo. Sao tsy mifankahazo ny resaka? Tahirin-kevitra faha-14 mirakitra ireo fanambaran’ny Sefafi, taona 2015, izay, milaza ny tsy fahombiazan’ny fitondrana.
Mahabe resaka, ohatra, ny hoe: atao kitsapatsapa toy ny manotrika atody ny raharaham-pirenena? Na izay hametrahana andraikitra amin’izany, fa tsy voadinika tsara sy lalina… Atao ahoana izao ny atody lamokany? Avela amin’izao, na… Hifampiandry sy hifanome tsiny lava amin’izay (h)atao indray?
Ny tsy azo lavina, mitondra faisana hatrany ny vahoaka: mandeha tsy fidiny toy ny faty nentina alina, tratran’ny tian-kano tsy tian-kano lava… Voafitaky ny hoe hitondra vahaolana amin’ny krizim-piainana ny fifidianana, tratran’ny akory izao amin’ny fampielezan-kevitra hoe hitondra fanovana.
Tsy vitan’izany, voalatsa na voalatsaka an-kady indray fa hoe manotrika atody lamokany? Na misy ny tsy manao inona amin’izany… Hatrany am-boalohany ny fitaka amin’ity hoe lamokan’atody. Tsy misy fomba hahalalana sy hampahafantarana izany mialoha? Mba tsy hikotrehana atody lamokany…
Ny atody, hono, tsy miady amim-bato. Vao mainka izay lamokany… Izay mitambatra, vato; izay misaraka, fasika. Mba misy ve ny firaisankina sy firaisam-bina amin’izay (h)atao amin’izany? Ny vato koa na lehibe aza, rehefa tsy miteny: taingenan’ny vorona na ny atody foy… manana elatra.
Nahoana no tsy misy ny fitambarana ho vato? Samy maka ho azy noho ny fahantrana sy ny fampahantrana, manantena mpitondra sy izay ataon’ny any ivelany… Lamoky ny lamokany raha ny vahoaka: kitsapatsapa lava, atao fitaovana, ihandronan’ny rihitra, maty tsy manota, tsy ahoana hatrany…